Accueil > Gazetin'ny nosy > Môdely Rwanda : Fiangonana 6000 sy môske 100 no nakatona
“Raha te handroso dia akatona ny fiangonana sy ny môske”, hoy ingahy Paul Kagamé izay filoham-pirenena ao Rwanda. Aleo feno orinasa ny firenena toa izay feno fiangonana, hoy ihany ity filoham-pirenena ity raha nanontanian’ny mpanao gazety izy. Ny taona 2004 tany ho any no nitrangan’izany voalohany ary mbola mitohy izany tamin’ny taona 2010 tany ho any.
Niroborobo izay tsy izy ny sekta tany Rwanda tamin’ny taona 90 iny noho ny fahantrana ka nahazo vahana ny ara-panahy. Mahatratra 100 ny môske nakaton’ingahy Paul Kagamé tany Rwanda hatramin’ny 25 taona nitondrany ny firenena. Tsy misy ady hevitra fa rehefa tsy fikambanana na fivavahana tsy mampandroso dia nakatony avokoa.
Ingahy Paul Kagamé nefa dia mpino katolika.
Ho an’i Rwanda dia ny fampandrosoana ara-ekônomika no alohan’ny zava-drehetra ka rehefa tsy mamokatra dia foanana. Vokatr’izay dia niakatra ambony ny harin-karena tany amin’ity firenena ity. Isan’ny firenena afrikanina mandroso indrindra amin’izao fotoana izao i Rwanda. Tsy raharahian’ny mponina any an-toerana izay ilazan’ny olona sy ny kômity iraisam-pirenena hoe mpanao didy jadona, mpampihorohoro na koa mpampijaly olona fa ny fandrosoana entiny no manan-danja amin’izy ireo. Ingahy Hitler na “the boss” no intsoana an’i Paul Kagamé amin’ny anarana fanarabiana azy.
Koa satria ity filoham-pirenena Rwandais ity no natao vahiny manokana amin’izao fiverenan’ny fetim-pirenena izao dia misy hevitra itoviany amin’ny tarigetran’ingahy Andry Nirina Rajoelina izany.
Araka ny voalaza omaly dia isan’ny firenena miady mafy amin’ny kolikoly i Rwanda ankehitriny. Tsy misy indrafo io fa rehefa tsy madio dia miandry azy ny fonja. Ny mpiasam-panjakana ambony sy ny mpitondra firenena no isan’ny lasibatra amin’izany. Tsy tamin’ny vanim-potoana naha filoham-pirenena an’ingahy Paul Kagamé ihany no anaovany fanadiovana lehibe toa izao amin’ny kolikoly ity fa hatramin’ny fanjakana teo alohany. Maro ny manam-pahaizana sy ny mptondra tany Rwanda no nandositra ity firenena ity satria rehefa maimbomaimbo kolikoly dia miandry azy ny fonja. Minisitra, manamboninahitra ambony amin’ny tafika, mpiasam-panjakana ambony marobe no naiditra am-ponja tao anatin’ny fitondrana Paul Kagamé.
Arakaraka ny nahabe ny fivavahana teto Madagasikara no naha adala ny vahoaka Malagasy, hoy ny mpandinika. Lasa mpangalatra, mpamono olona, mpijangajanga, ny ankamaroan’ny Malagasy rehefa nitombo isa ny fiangonana. Niha adala hoy ny fitenenana. Ny mahagaga nefa dia feno hipoka ny fiangonana rehetra ireo isaka ny alahady. Misy mihitsy aza no mivavaka isan’andro ireny sekta ireny. Raha tany Rwanda ireo dia efa nakaton’ingahy Paul Kagamé.
Haka môdely izany ve ny fanjakana ankehitriny? Dia ho hitantsika izany satria efa ny asa tagnamaro izao no azo avy any Rwanda.
Raha tonga amin’izany isika dia ho be ny môpera sy masera ary pastera no ho very asa.